Ngaba sihlala kwisikhululo seerobhothi esipheleleyo? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/GPS / Izixhobo/Ngaba siphila kwisikhululo esiphezulu se-robotic?
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besinencoko emnandi nomhlobo wam geofumado malunga nokusetyenziswa endikunika kona ngoku ukubonakalisa, kwaye ukuba iirobhothi zingandinceda nangayiphi na indlela ukunciphisa ixesha. Apha ndishwankathela inxalenye yentetho.
Oko sikubiza ngokuba sisikhululo se-robotic.
Ngamafutshane, sisixhobo esinomsebenzi wokukhangela ekujolise kuko ngokwakho, ukuskena kude kube kuyifumene. Oku kusebenza nomqokeleli osebenza kwisikhululo esivela kwindawo apho i-prism ikhona khona.
I-brand nganye sele inamathoyizi okwenza oku, iyona nto ibhetele ndiyibonile kule ngqalelo.
U-Sokkia akazi ukuba sele ibonakalisile, kodwa iTopcom, zombini inxalenye yeAshteki.
Kuphando oluqhelekileyo, njengokuba kunjalo ne-cadastre, ukusetyenziswa okuncinci ndibona, ubuncinane kwezi zimbini zizathu:
1. Ingacotha kancinci. Yintoni eyenzekayo kukuba xa umqhubi wesikhululo eshiya inqanaba lezixhobo, ethatha umqokeleli wezandla kwaye ehamba neprism ukulinda izixhobo ukuba zisifumane, baya kuba sezimotweni ezithile. Enye yazo kukuba esi sixhobo sitshayela kwicala elihamba ngokwewotshi de sifumane i-prism, kwaye ukuba sihamba kwicala elichaseneyo, kwinqaku ngalinye liya kutshayela phantse ngokupheleleyo.
Mhlawumbi, njengoko umhlobo uthe geofumedUkuba ezi zixhobo zinesenzi sokusebenza esisebenza ngesantya esiphezulu se-UHF, oko kuyakwenza ukuba ikhawuleze itshayele i-quadrant ezi-4, ukuze ikwazi ukuyifumana iprism kwaye emva koko itshayele kuloo quadrant. Oku kungonga ixesha elininzi.
2. Akukhuselekanga. Lo mgangatho wawukho ukutshaya ngokuyinxenye, ukucinga kwamazwe apho abasebenzi babizayo kwaye kunokwenzeka ukuba kusindiswe abasebenzi betyathanga. Ngale ndlela, umvavanyi uba ngumqhubi wesikhululo kananjalo lowo uhamba kwi-prism, ikwangulowo uphethe i-tripod, i-bodyguard yakhe, ngamafutshane, iyonke. Kodwa lo mgangatho awusebenzi kumazwe athetha iSpanish apho iindleko zokuhlawulela umntu ophantsi ziphantsi kwaye apho, ngokuchaseneyo kumazwe aphuhlileyo, ubusela bezitishi zizonke zenzeka nokuba unonogada oxhobileyo ecaleni kwakho.
Ukusetyenziswa okubonakala kubonakala kunokwenzeka ukuboniswa. Kukusebenza okukuziswa zizikhululo zala maxesha, ezivavanya indawo iphela, kunye neradar, emva koko oku kuqhutywa njenge-mesh-dimensional mesh. Ityala liya kuba, umzekelo, umsebenzi apho intshukumo enkulu yomhlaba, ukusika, ukuzaliswa kuqhutywa; Ngokutshayela ngentsimbi yesi-6 kusasa imeko yokuqala yayiza kufunyanwa, ime kwindawo enye, ngentsimbi yesi-5 emva kwemini, kwimizuzu emi-5 singaba nokubala kwevolumu evelisiweyo.
Kananjalo kwimisebenzi ekhethekileyo, njengaleyo eyabhengezwa nguLeica, kwikhasi le-Hexagon (inkampani esandul wathenga i-Intergraph).
Ukuba enye yale mihla, uRhulumente waseUnited States ubaqesha ukuba benze isifundo se-welt nganye eneempumlo zikaJorge Washington ... ngokuqinisekileyo, i-robotics ilungile.
Haha baqhayisa izibingelelo zakhe
UCarlos Chavez uthi:
Ngaba umntu unokundixelela ukuba i-robotic isitishi esipheleleyo sinokukhetha ukuyisebenzisa ngesandla, ukuyisebenzisa
isitishi se-robotic esipheleleyo kufuneka sibe nemvume okanye yongeze iprogram.
UFeliksi Nuñez uthi:
Ikhasi elihle kwixesha lam elibi elingcono kunokuba uphendule kwaye uxoxa ngeli phepha. Vuyiswa!
“…xa inqanaba lokuvuthwa lifikelele phezulu kakhulu, bhalela elo nqanaba, ungachithi xesha ngokulandela iiblogi ezingahlangabezani nezo zilindelekileyo. ”
Ndicinga ukuba kunjalo.
Ukuqinisekisa ngokuqinisekileyo ngumqondo wokuba sonke kufuneka sifunde okuthile kobu bomi. Mna, ngenxa yesi sizathu ndizuze amagqabantshintshi ngolu hlobo; Andisabamodareyithi, kungcono ndizonwabele.
Yaye ukuba ngaba malunga nokuxabisa, xa izinga lokukhula lifikile kakhulu, libhalelwe elo nqanaba, ixesha alilahlekanga ekulandeleni iiblogi ezingenakuhlangabezana nazo.
Ngenxa yokuba i-ARIN database ye-WHO ingakhohlisa ngokuhlaziywa kwimixholo engaphezulu kweyodwa, ngaphezulu kweyodwa ibandakanya, kwi-CMS engaphezulu kweyodwa.
Ibhulogi engenangqondo embi nangendlela utsho ngayo uFlorentino Fernñandez
Ndiyathanda le blogi kakhulu.